Inbadan oo ku saabsan garoonka Maalgashadayaasha Bulgaria ee loogu talagalay hudheelka cusub ee Kempinski ee Tansaaniya
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Inbadan oo ku saabsan garoonka Maalgashadayaasha Bulgaria ee loogu talagalay hudheelka cusub ee Kempinski ee Tansaaniya
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Eswatini Breaking News • Films • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Dib-u-dhiska • jiga • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dalxiiska ayaa ah diiradda ugu weyn ee Tansaaniya. Wafdi ka socda Bulgaria toddobaadkii hore ayaa ku sugnaa Daarusalaam, Tansaaniya si ay uga wada hadlaan mashruuc dalxiis oo cusub oo ay sameysay Kooxda Jarmalka Hotel Kempinski.
Kooxdan ayaa fiiro buuxda u yeeshay Hon. wasiirka Dr. Damas Ndumbaro, iyo Cuthbert Ncube, guddoomiyaha guddiga dalxiiska Afrika.
Kooxda Hoteelka Kempinski ee fadhigeedu yahay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa qorshaynaysa inay ka dhisato Huteel Five Star Kempinski Waqooyiga Tansaaniya
Hoteelka ayaa loo malaynayaa inuu ku yaal Tarangire ee Waqooyiga Tansaaniya, Harada Manyara, Ngorongoro iyo Seerayaasha duurjoogta ee Serengeti.
Madaxweyne Samia waxay qaadatay dadaal shaqsiyeed si ay u hagto dokumentiyo gaar ah, “Socdaalka Boqortooyada”Oo loogu talagalay in lagu calaamadeeyo meelaha dalxiiska ee Tansaaniya ku leedahay adduunka.
Wefti maal -gashadeyaal Bulgaariya ah ayaa toddobaadkii hore ku sugnaa Tansaaniya si ay uga wada hadlaan mashruuc lagu maal -gelinayo Hoteel oo ku kacaya 72 Milyan oo Doolar.
Mr. Ayoub Ibrahim, oo ah Maamulaha Shirweynaha Dalxiiska iyo Maalgashiga Caalamiga ah ee Mauritius- UK ayaa mas'uul ka ahaa wafdiga booqanaya Tanzania toddobaadkan.
Sida laga soo xigtay ilaha eTN, dhismaha xarun cusub oo Kempinski Resort ee dalka ayaa bilaabmi doonta Janaayo 2021. eTurboNews uu gaadhay Mr. Ayoub waxaana loo sheegay in warsaxaafadeed la soo saari doono taariikh dambe, laakiin loo tixraacayo macluumaadka qaybta koowaad ee maqaalkan oo leh khaladaad.
Cusboonaysiinta Dhaqaalaha Tansaaniya ee ugu dambaysay laga bilaabo Julaay waxay iftiiminaysaa awoodda baaxadda leh ee aan laga faa'iidaysan ee waaxda dalxiiska si ay u waddo ajendaha horumarinta dalka. Falanqayn cusub ayaa ka hadlaysa arrimaha soo jireenka ah ee wajahaya dalxiiska Tansaaniya iyo sidoo kale caqabadaha cusub ee uu keenay masiibada COVID-19.
Warbixintu waxay sheegeysaa in masiibada ay fursad u siineyso ficillada siyaasadeed ee waaxda si ay uga soo kabtaan muddada dhow oo ay u noqdaan mashiinka waara ee kobaca ay wadaan qaybaha gaarka loo leeyahay, ka mid noqoshada bulshada iyo dhaqaalaha, iyo la qabsiga cimilada iyo yareynta muddada fog.
Ma jiro wax macluumaad ah oo la sii daayay oo ku saabsan faahfaahinta, halista, qiimaha Tansaaniya, iyo faa'iidooyinka laga filayo dalkan Bariga Afrika ee socdaalka iyo dalxiiska waqtiyada aan la hubin ee COVID.
Mr. Cuthbert Ncube, oo ah guddoomiyaha saldhigga Eswatini Guddiga Dalxiiska Afrika waxaa lagu casuumay ITIC si uu uga qeybgalo doodda wasiirka Tanzania ee Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska Dr. Damas Ndumbaro.
Mr. Ncube ayaa ka faa’ideystay fursadda uu kala hadlay wasiirka heerka iskaashiga iyo hagidda Guddiga Dalxiiska Afrika uu miiska u soo saari karo Olole Calaamadeyn Dalxiis oo caalami ah oo cusub oo Tansaaniya loo sameeyo.
Kulamada ka dib, wufuuddu waxay booqdeen Aagga Ilaalinta Ngorongoro (NCA) ee Waqooyiga Tansaaniya.
Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) wuxuu diyaar u yahay inuu iskaashi la yeesho dhammaan daneeyayaasha Afrika si kor loogu qaado dalxiiska sumcadda iyo suuqgeynta Afrika. Hadafka loogu talagalay ATB waa in Afrika laga dhigo mid kaliya oo la doorbido dalxiiska caalamiga ah.
Intii uu kulanka la lahaa Wasiirka Dalxiiska Tansaaniya, ATB waxay ballan -qaadday inay taageeri doonto dhiirrigelinta Bandhigga Dalxiiska ee Bulshada Bariga Afrika (EAC) oo markii ugu horreysay lagu qaban doono Tansaaniya.
Mr. Ncube ayaa u sheegay wasiirka in ATB ay diyaar u tahay inay wadashaqayn la yeelato Dawladda Tansaaniya iyada oo loo marayo kanaallada caalamiga ah ee ATB oo ay ku jiraan aaladaha warbaahinta iyo isdhexgalka kale ee fulinta.
Guddiga Dalxiiska Afrika waxaa lagu aasaasay taageerada eTurboNews in 2018.
Qoraa: Apolinary Tairo, eTN Tansaaniya